Life Archives — njem Lee - Official Site
Oh, a hụrụ m gị n'anya, yeah
Ka mba ndị ọzọ, yeah
Mgbe m hụrụ gị ọchị gị na-enwu dị ka okpomọkụ, yeah
Ị maara na-enwe mmetụta mgbe ha okwu ida
Ọ bụ ike verbalize ihe m wanna-agwa
Ka m mini m, m obere nwoke
A ga-ekwu okwu na nwa okwu, Amaghị m ihe ị na-ekwu
Ma ọ bụ music m ntị ezie na
Ọganihu bap gị Papa mgbe m na nso ezie na
Mama-etinye gị na ha polos na skinnies
Mgbakọ fee ọhịa, ị na-flyer karịa a Leer ezie na
Ị nwetara na a gwara agwa nwa ewu swag on ha
-Achọ ka gị mama na papa gi na ha
Guzozie si n'akpa nwa gị dị adị ọhụrụ
E tiri m nkpu ike otú a ruo mgbe m na-enweghị anya mmiri ekpe
Kemgbe ahụ ị na-a ọnụ ọchị na ihu n'ala
Mgba kwa egwú, ọhịa na ebe
Lee m maara na ị nwetara aha m
Ma m chọrọ yi ya dị ndụ n'ihi ude ya, a hụrụ m gị n'anya
Oh, a hụrụ m gị n'anya
Ka mba ndị ọzọ
Mgbe m hụrụ gị ọchị gị na-enwu dị ka okpomọkụ
My ọhụụ nwere ike ịbụ ghọtakwuo dịghị nweghị dịghị
Akpata ị mara mma, ọ bụ ihe ijuanya m hụrụ gị n'anya
M ike ikweta na ị na nke m, M ike ikweta na ị na nke m
Na ị na-mgbe niile na uche m, M ike ikweta na ị na-niile m (2X)
Enweghị m ike…
Mgbe ọ bụla m biputere foto nke ezinụlọ m na mmadụ mgbasa ozi, Ibọrọ bụ mgbe niile fun. Kacha nkịtị na-, "Nwa gị nwoke mere nwoke mara mma!"Ma ọ bụ" Gịnị a mara mma ezinụlọ!"Ma otu n'ime ndị ọzọ na-ahụkarị Ibọrọ bụ, "Ọ bụ nwunye gị na-acha ọcha?"Ndị mmadụ na-ajụ m na-egosi mgbe ụfọdụ kwa. Azịza ya bụ ee. My nwunye bụ a mix nke Hungarian, Italian, na Polish-nke ka ọtụtụ ná ndị mmadụ dị nnọọ pụtara ee, ya na ọ na-acha ọcha. Nke a dị adịghị mkpa ka ụfọdụ, ma-awụ akpata oyi ma ọ bụ ọbụna ihe na-akụda ndị ọzọ. Echeghị m na onye ọ bụla ga-eju ma ọ bụ ndakpọ olileanya agbụrụ di na nwunye, ma m ka na chọrọ ikwu banyere ihe mere m lụrụ n'èzí m "agbụrụ.
The mkpebi lụọ onye si a dị iche iche agbụrụ abụghị a siri ike onye m. Ọ dịghị mgbe m nọdụrụ ala na dere si a uru na ọghọm ndepụta. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na m mere, eziokwu ahụ bụ na nwunye m mgbe hụrụ ihe merenụ nke "Martin" ga-abụ na con Atiya. ma n'eziokwu, M na-agonize n'elu ya ma ọ bụ na-achọ ndụmọdụ banyere ma ọ bụ OK. M chekwara na ọ bụ nwaanyị m ga-alụ, n'agbanyeghị na ọ bụghị nwa.
Ụfọdụ ndị ga-dịghị mgbe tụlee ịlụ onye na-abụghị otu agbụrụ dị ka…
M na-na-na-Trayvon Martin saga site na mbu. Dị ka ọtụtụ nke ị M na-ele ozi ọma mkpuchi, agụ isiokwu, na-ekwu banyere ya na enyi. Ọ adịkwaghị ọha mkparịta ụka na-ewe iwe a ọtụtụ ihe dị mkpa ụka banyere agbụrụ na America. The jọrọ njọ eziokwu nke ịkpa ókè agbụrụ e kewapụrụ n'ihu anyị ihu, na ọbụna ndị na-amasị hà ya adịghị adị a manyere ikwu banyere ya.
Karịrị otu afọ mgbe e mesịrị, Trayvon egbu egbu e gbalịrị ma ha ahughi ikpe mara. Nke ahụ ọ pụtara na anyị kwesịrị ịkpali on si mbipụta? Ha hụrụ ya aka ya dị ọcha, otú a "agbụrụ mbipụta” ga-abụ ndụ n'ezie dị ka anyị chere na ndị na, nri? Ọ gwaghị nke ahụ abụghị eziokwu. M achọghị na-arụ ụka banyere ihe ndị metụtara, Trayvon uma, ma ọ bụ mkpebi ikpe ahụ a mwute ọnọdụ, ma m na-eme na-eche ụfọdụ ụka ga na-. The ikpe bụ n'elu, ma mkparịta ụka ekwesịghị.
Gịnị mere ndị Interest?
Amaara m na e nwere ọtụtụ ndị eche ihe mere na nke a karịsịa nwerela weghaara uche nke ọtụtụ. Ndị ọzọ na-eche ihe mere na ụfọdụ nwa folks bụ otú ngwa ngwa imeebere Trayvon Martin, n'agbanyeghị eziokwu na o nwere nsogbu nke ya onwe ya. Ka emechara,…
Tupu afọ m wee na-tour ọhụrụ m akwụkwọ, The Good Life. n'abalị ọ bụla, M kwuru okwu na-agbalị aza ajụjụ ahụ, "Gịnị ka ọ pụtara ibi ndụ na ndụ dị mma?” na Chattanooga, TN, anyị dere ozi na m na-ezitere ya n'elu. Akwụkwọ wepụtara na October 1, 2012 na i nwere ike ịzụta ya Ebe a. Iji mụtakwuo banyere akwụkwọ ị nwere ike pịa Ebe a. Ị nwere ike ịzụta The Good Life album Ebe a. Ị na-ebi na ezi ndụ?
Gịnị bụ Good Life?
Ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla genre nke music na-eme mgbe niile ekwu okwu banyere na-achụsokwa ezi ndụ, ọ bụ hip-iwuli elu. M hụrụ n'anya hip-iwuli elu. M hụrụ n'anya hip-iwuli elu maka ndụ m nile. E nwere ihe dị nnọọ ihe banyere rụọ, na Rhymes, na ike nke na-eme mgbe niile dọtara m na. Mgbe m bụ afọ iri na ụma, mgbe m bụ anọghị na klas ma ọ bụ na-ehi ụra - ma ọ bụ n'ụra klas - m na-ege ntị ọkacha mmasị m rappers. M na-kpọgidere ha okwu nile ọ bụla, na ha nwere ọtụtụ ikwu. M mara ọtụtụ rappers adịghị anwa ịbụ ndị ozizi, ma nke ahụ apụtaghị na m na ọ bụghị na-amụta. M ege ntị nke ọma echiche ha banyere ihe ọma ndụ - na-amasị m ile ihe m nụrụ.
M nwere mmasị songs dị ka "Ego bụ na Ihe Ọ Bụla,"Na m nọ na-ege albums jiri utu aha ndị dị ka" Get Rich ma ọ bụ Die Ịgbalị. "N'ihi ya, ọ bụ n'ezie bụghị ihe ijuanya na m echiche nke ọma ndụ na-enwe a obere akpa nke mere stuffed na ọ ga ọbụna nso. Ọ bụghị ihe niile banyere ego, ezie na. M mụtara banyere hedonism, mmekọahụ nkịtị, ịhụ ihe onwunwe n'anya, irresponsibility, umengwụ, ọgwụ ọjọọ eme ihe, na-na-akwanyere - niile dị ka iberibe na mgbaghoju anya bụ…
Ọtụtụ n'ime unu maara m dị ka a rapper na onye ngosi, ma eziokwu bụ, na obi m na mgbe nile onye na-ekwusa.
N'ihi na dị ka ogologo oge m na a na-eme music, m kasị ọchịchọ kemgbe na-ekwusa ozioma na-ekwusa ịdị mma na ebube nke Jizọs Kraịst. Chineke amara m na nwere ohere iji music ime na on a ọha ogbo. M na-hụrụ n'anya ọ bụla nke abụọ nke ya ma na m na-agbalị ime ya na mma. N'ime afọ, M na-ghọtara na Chineke na-akpọ m na-akwadebe m bụghị naanị ime ka music, ma ikwusa ozi ọma na-ede.
Ọ bụ ya mere afọ gara aga m dere The Good Life, a akwụkwọ na-aga miri n'ime ozi n'azụ m ndekọ nke otu aha. Ọ bụ na-mere m mara ọkwa ikpeazụ ọdịda na m na-enweghị ike njem nnọọ dị ukwuu dị ka m anọwo. M chọrọ ịmụta otú na-a kwesịrị ntụkwasị obi pastọ, na na ike na n'ezie na onodu nke ụka. Ya mere, m na-ewere oge itinye ego na mmụta si Chineke ozuzu aturu na chọọchị m na Washington, DC. Jehova dị njikere, dị ka m na-eje ozi na mkpara na chọọchị m, Aga m…
M na-ele ọtụtụ n'ime ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbakọ ikpeazụ ndị a izu abụọ. The n'ikwu okwu ihu ọha na m nwere ike ọ gaghị enyere ma n'elu-nyochaa ozi na oratory nkà nke oghere mmeri na-akwado ha. Onye ọ bụla nọ na ogbo gbalịrị ime ka ị na nke onye akụkọ na / ma ọ nnukwu nkwa.
M ga-ekweta, ụfọdụ n'ime ha na ọchịchọ ndị magburu, ma ọtụtụ n'ime okwu obi gbakọọ, efu, na kpere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị- m dịkarịa ala. Ụfọdụ n'ime ekwu okwu ihe ndị ogologo-ezighị ezi kwa. Ma arụ ụka nyiwe bụ isi ihe a post.
Otu n'ime ihe ndị m ghọtara bụ na mgbe ndị ọzọ nọ na-agbalị na-ere gị ha na-aga ime, ha na-anwa ire gị ha worldviews. Dị ka ha, ihe propserity bụ na ala nke nkwa, na ha party chọrọ ịbụ gị Moses. N'echiche ha, ezi ndụ na-na-ndị bara ọgaranya mgbe ị rụsie ọrụ ike, na ha nwa akwukwo bu ya bụ Onyenzọpụta onye nwere ike na-gị n'ebe.
Ugbu a, e nweghị ihe ọ bụ mmehie banyere akụ na ụba. Na a na-ụgwọ maka ọrụ siri ike abụghị ihe ọjọọ, ma a na-apụghị ebe olileanya anyị ụgha. Akụ na ụba ekwesịghị ịbụ anyị ọgwụgwụ ihe mgbaru ọsọ, ọ kwesịrị a ga-esi a ukwuu ọgwụgwụ. Anyị na-enweghị ike imeli…
Akwụkwọ releases on October 1, ma i nwere ike tupu-iji ya ugbu a Ebe a.
Ọ bụ onye obi kwaa, ọ bụ n'obi na-eto eto…
Biblical ịbụ nwoke na Ịdị Mkpa nke-achọ Ịdị si Ebe ọ chọrọ Chineke on Vimeo.
My enyi na Ebe ọ chọrọ Chineke jụọ m ajụjụ ụfọdụ banyere ihe mgbochi ndị nwoke na otú idozi nsogbu. A bụ ihe m kwuru
"N'ihi na afọ, M na a na-eme music na aka ụwa anyị echiche na-ezo aka Christ – ma o nwebeghị mgbe a na-agaghị emeli na-music, n'ihi na e nwere bụ naanị nke ukwuu i nwere ike ikwurịta okwu na a song,"Na-ekwu Njem. "The…
My anọ solo album, "The Good Life” ka eze tọhapụrụ! Zụrụ album si iTunes Ebe a. I nwekwara ike ghota ihe album na-echekwa na Lifeway, Family Christian, Mardel, na Target & Wal-Mart (họrọ na-echekwa).
Ọzọkwa, ị na-ekiri ọhụrụ video maka "M na Good” featuring Lecrae Ebe a. Anyị partnered na Voice nke Martyrs on a iji mata banyere mkpagbu na-agba ume kwere ekwe iguzosi ike.
Sonyere m na-ekpe ekpere na Jehova ga-eji nke a oru ngo iji maa na-agba ume ọtụtụ!
"Adị m mma” bụ nke ikpeazụ songs na-e dere maka ọhụrụ m album, The Good Life. Lecrae na m n'ezie na dere na dere kpamkpam dị iche iche song, na anyị mmasị na ya na mbụ. Ma n'ikpeazụ, anyị kpebiri na ọ bụ nnọọ mara ezigbo mma; na anyị chọrọ wepụta ihe uku. N'ihi ya, m na-egwuri a ole na ole gafere ya na m na e deghị lyrics maka ma, na anyị abụọ na ịhụnanya na onye a. Ọ bụ The Epic, ike ike, na catchy.
M gwara ya na m chọrọ ide ukwe na-ekwurịta okwu anyị nche n'ime Kraịst. M chọrọ agba Ndị Kraịst ume ka ha kwụsị ibi ndụ na-atụ egwu ma malite ije Ndị Rom 8. Anyị kpebiri na "M na Good” isiokwu, anyị jụrụ Jehova maka enyemaka, na anyị malitere ekewetde ke abụghị nkuku nke Metụtaruru si Atlanta studio. Anyị dere ọtụtụ n'ime anyị na vocals na abalị, na mgbe e niile mere anyị n'anya ya.
Olileanya nkọwa a nke lyrics ga-enyere anyị aka ịgbari na ọdịnaya ...
M na-anụ nsogbu nke na-abịanụ m, ọnwụ bụ na nke m ụzọ /
Egwu ekwu I'ma n'iyi dị egwu, ma nke ahụ abụghị ihe Onyenwe m asị /
Ịdebanye aha maka Man Up Conference Ebe a ma na-amụta ihe banyere m album “The Good Life” Ebe a
“The Good Life” tụlee April 10. na- “robot” free Ebe a
N'ihi na nke mbụ nke 2011, M mere adịghị songs, ọ dịghị atụmatụ, ọ dịghị egosi, ọ dịghị ihe ọ bụla. M kwagara Washington DC, were ihe 5 ọnwa anya maka a ịzụ atụrụ ụwa. Ọ bụ ezie na m na-adịghị eme njem nke ụwa na-eguzo n'ihu a oké osimiri ndị mmadụ kwa abalị, ọ bụ otu n'ime ndị kasị oge mkpụrụ ji amị nke ndụ m. Mgbe ụwa gwụrụ m malitere njem ọzọ na ji nwayọọ nwayọọ malite ịrụ ọrụ on ọhụrụ music. Around-ada m ụkwụ n'ime zuru gia-arụ ọrụ na m anọ solo album. Na mgbe ọnwa ọrụ ike, na album na-mara mma nke ukwuu mere.
M ike ọbụna na-egosipụta ụdị obi ụtọ m na-hapụ ya. M na-achọ inye ndị mmadụ ihe m na-enyeghị ha n'iru. Achọghị m ka m na-remake ihe album M ugbua mere. Na m chọrọ inye gị a ọba ọhụrụ, na ọhụrụ music, na ụzọ ọhụrụ nke ime ememe otu agadi eziokwu.
na 2006 on mbụ m album, Ọ bụrụ na ha maara, M chọrọ ịgwa ndị mmadụ banyere a dị ebube Chineke onye m ka ha mara. na 2008, "20/20″ wee si na m chọrọ ịgba ume folks na-ahụ Onyenwe anyị na ezigbo ọhụụ. 2 afọ mgbe e mesịrị, "N'agbata Abụọ…
A di na nwunye nke izu gara aga, M kwuru okwu na Campus Outreach National Conference banyere bụla kwere ekwe ibu ọrụ izisa ozi ọma. My ederede bụ 2 Ndị Kọrịnt 5:18-21. Lee bụ video site na nnọkọ.
One Life | Kee ya – njem Lee si campus Outreach on Vimeo.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ebe a bụ video site na a panel ụka m bụ akụkụ nke ka nke ọma. The ụka bụ banyere campus ozi, na chọọchị dị n'ógbè, Akwa Commission, wdg:
ndi ozuzu aturu Panel si campus Outreach on Vimeo.
Plus, M nwere ike ikwu na ị na lelee niile ndị ọzọ media si ogbako. E nwere tọn oké ozizi na m chere na ị ga-ahụ na-ewuli elu.